Discount EPS furo hove dzinoyangarara Kugadzira uye Fekitori | XiongHuye
Block richigadzirisa Machine
Rakaumbwa richigadzirisa Machine
Full Automatic richigadzirisa Machine
Semi-otomatiki richigadzirisa Machine
Panel yekucheka muchina
CNC Kucheka muchina
PU mwaya Machine
EPP Furo Chigadzirwa
EPS Furo Mabhesi
EPS Furo Ropa Rinoongorora Tube Tray
EPS Furo Ice Cream Bhokisi
EPS Raw Zvinyorwa
Furo Kurema Kwekuwedzera
EPS furo hove dzinoyangarara
Yakakwira Hunhu - Yakagadzirwa yemhando yepamusoro EPS Foam iyo isiri nyore kutyora kana kuumbika, inogona kushandiswa kwenguva yakareba, inogona kushandiswa kuteedzera hove inoshanda basa.
Rakajeka Ruvara - Hove dzinozvida zviri nyore kwazvo kukwezva hove. Reva iyo yekurapa kwepamusoro, kunze kweacrylic machira, isu tine yakajeka pendi, yakajeka glated uye glittery pendi.
Shanda Zvakanyanya - Inoteerera kwazvo kana hove yacho yatora chirauro. Shanda Zvakakura pakubata hove mune dzakasiyana mamiriro uye nekudzika.
Kubata hove inzira huru yekukwezva hove kune chirauro chako kana kuoneka kwemvura kuri pasi. Unogona kuzvishandisa seyekutarisisa poindi poindi kuti ugare uchiziva kuti chirauro chako chiripi
Kune mhando dzakawanda dzakasiyana dzezvikwata zvekuredza zviripo. Rudzi rwaunoda runoenderana nekuti urikubata hove kupi, zvakaita sei maratidziro akaita mumvura, kumhanya kuri kuita mhepo, saizi yechirauro nekudzika kwemvura.
Ungangoda kuyedza vamwe kuti uone kuti ndeyipi float ichakushandira zvakanyanya. Iwe unogona kusarudza kubva pamhando dzakasiyana siyana, dzinosanganisira matanda anoyangarara, anotenderera, macork poppers (ayo anogona kuita ruzha) uye zvakayangarara kunge mazai (ayo anogona kufamba-famba akatenderedza matombo nematanda). Kusarudza iyo chaiyo ichiyangarara kunogona kuita mutsauko pakati pezuva rakanaka rekuredza uye dhonza risingabatanidzi chinhu zvachose.
Aya maFoam Floats akakosha ekuredza hove kwePompano uye anowanikwa zvese muFlorida kana uchiredza idzi mhuka dzinofamba. Ivo vanoshandawo kwazvo kune mamwe akawanda masitayera ehove kana iwe uchida kuwedzera ruvara uye kana kutenderera kune yako yekuraurisa rig. Iwo anowanikwa mune mapakeji e100 uye gumi nemaviri mavara akasiyana.
Mamwe maumbirwo uye hukuru hwemafuro ekuredza hove anowanikwa zvakare, kana zvichidikanwa, ndapota tiudze.
0 # 7 * 12.5mm
1 # 9.5 * 16.5mm
2 # 11.5 * 20mm
3 # 13.5 * 25mm
Pashure: EPP furo bhokisi
Zvadaro: EPS Furo Ice Cream Bhokisi
Nzvimbo yekuchamhembe, Nanlv Industrial Zone, Xinji Guta, China